प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याए नेकपा फुटाउन बाटो खोल्ने अध्यादेश - Himali Patrika
प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याए नेकपा फुटाउन बाटो खोल्ने अध्यादेश
हिमाली पत्रिका ८ बैशाख २०७७, 11:26 am
८ वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजनलाई बाटो खोल्ने गरी सरकारले सोमबार अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी कानून संशोधन गरेको छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशले अब पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आवश्यक परे पार्टी फुटाउनका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान ऐनमा पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्छ ।
तर, नेकपाभित्र ओली समूह अल्पमतमा छ । संसदीय दलमा चाहिँ ओली पक्षको पकड बलियो रहेको प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार सोमबार क्याबिनेटमा ल्याइएको अध्यादेशले पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दलमा मात्र ४० प्रतिशत पु¥याउँदा पनि विभाजनले मान्यता पाउने प्रावधान समेटिएको छ ।
अध्यादेशको यो प्रावधानले अब ओली समूहलाई पार्टी फुटाउन सजिलो भएको छ । अध्यादेश नल्याएको भए पार्टीभित्र ४० प्रतिशत नपुु¥याउँदासम्म विभाजनले मान्यता पाउन सक्दैनथ्यो ।
सरकारले किन ल्यायो अध्यादेश ?
कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेका बेला सरकारले यस्तो अध्यादेश किन ल्याउनुप¥यो ? के प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा फुटाउन चाहेका हुन् ? सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट यस्तो प्रश्न उब्जेको छ ।
अध्यादेश पारित भएसँगै नेकपाभित्र तरंग उत्पन्न भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकलगत्तै पूर्वमाओवादी खेमाका मन्त्री प्रचण्डनिवास खुमलटार पुगेका छन् ।
यद्यपि कतिपय नेकपा नेताहरुले चाहिँ पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड लगायतका नेताहरुलाई तर्साउनका लागि मात्र यो अस्त्र प्रयोग गरेको हुन सक्ने अनुमान पनि लगाइरहेका छन् ।
पार्टीभित्र प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतम लगायतको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार प्रचण्डसँग लामो छलफल गरेका थिए । सोही छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउने चेतावनी प्रचण्डलाई दिएका थिए ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार अर्का नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि बालुवाटारमा घण्टौं छलफल गरेका थिए । प्रचण्ड र नेपालसँगको दुई दिनको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दल त्याग सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा ल्याएका हुन् ।
तर, महामारीका बेला सबै दलहरु मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले नेकपाभित्रै अस्थिरता र अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल दल विभाजन गर्छन्, या आफ्ना नेताहरुलाई तर्साउनेका लागि मात्र यो अस्त्र प्रयोग गर्छन् ? यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।
तर, महामारीका बेला सरकारले गरेको यो निर्णय ‘बेमौसमको बाजा’ हो भन्ने चाहिँ नेकपाकै धेरै नेताहरुले अनुभूत गरेको देखिन्छ ।